နှစ်လပိုင်း နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(2/10)
ဖေဖော်ဝါရီလ အကောင်းဆုံးနေရာကို မိတ်ဆက်ပေးသောနေရာဖြစ်ပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီသည် တစ်နှစ်လုံးတွင် အအေးဆုံးရာသီဥတု။ ဆောင်းရာသီတွင် သာလျှင်မြင်နိုင်သော ရှ့ ခင်းများကို မြင်နိုင်ပါသည်။ နှင်းများဖုံးထားသော ဂျပန်အိမ်များ၊ မီးထွန်းထားခြင်းများ ၊နှင်းပွဲတော်များ ထို့ နောက် မြန်ဆန်စွာပွင့်သော ဆာကူရာ၊မက်မွန်များကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ နွေးထွေးသော အသွင်အပြင်များ ဝတ်ဆင်ကာ အပြင်ထွက်ပါ။
အဆုကခေတ်တွင် တည်ဆောင်ထားသော ဘုရားကျောင်း။ တိုးယာမရှု့ ခင်းများကို သင်္ကေတအနေဖြင့် ချန်လှပ်မထားသင့်သော အမြင့် ၄၆ မီတာရှိသော ဘုံငါးဆင်းကျောင်...
ရုပ်ရှင်နဲ့ တီဗွီဇာတ်လမ်းရိုက်ကွင်းတွေမှာ များစွာအသုံးပြုထားတဲ့ ကျိုတို . အာရရှိတောင်ရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တယ်။ နှစ်တိုင်း ဒီဇင်ဘာလမှာ ( ကျိုတို. ...
အိုဆိုရဲဇန်း၏ ချိုင့်ဝှမ်းတွင်ရှိသော မီးတောင်ပေါက်ဝရေကန်။ ပြင်ထန်သောအက်ဆစ်ဓာတ်ရှိပြီး အစိမ်းရောင်ရေကန်တွင် ရှင်သန်နေကြသော သက်ရှိသတ္တဝါများ...
မြို့ လည်ခေါင်မှာရှိတဲ့အစိုးရပန်းခြံဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းဦးမှာ မိုမိဂျိတွေက ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပတဲ့ တိုကျိုအိုလံပစ...